HomeWararka MaantaDhaawacyo Sababay Dib U Dhaca Ku Dhawaaqista Xulka Qaranka Spain ee K-Aduunka
Tababaraha xulka Qaranka Spain, Del Bosque ayaa dib u dhigay inuu soo xulo 23 ciyaaryahan ee xulkiisa rasmiga ah ee uga qayb geli doona koobka adduunka, taas oo ay tahay inuu soo magacaabo inta ka horeysa 2-da bisha dambe ee June.
Tababarahan 63 jirka ah ayaa shaaciyey inuu dib u dhigay xulkiisa rasmiga ah, iyadoo uu ka dhursugayay ciyaartii finalka champions League ee Real Madrid iyo Atletico Madrid.
Ciyaartii dhex martay labada kooxood ee isku magaalada ah ee sababta u noqotay in ay baaqato ku dhawaaqista xulka Spain ayaa waxa dhaawacyo ay ka soo gaadheen ciyaartooyada Juanfran iyo Diego Costa oo dhaawac ciyaaray inkasta oo uu bilowgii ciyaartaba dibedda uga baxay garoonka, waxaanay arrintani sababtay in uu mugdi galo in ay ka qayb gelayaan koobka adduunka.
“Waxa aanu dib ugu dhignay (ku dhawaaqista xulka) maadaama aannaan ogeyn xaaladda jidheed ee ciyaartooyada” ayuu yidhi Del Bosque oo Axaddii u waramayay wariyeyaasha.
“Illaa 2-da June waajib khasab naguma aha in aanu FIFA u gudbino xulka, waannanu u baahanahay dhamaan ciyaartooyada in ay halkan yimaadaan oo aannu xaaladdooda ku qiimayno tababarka.
Tababare Del Bosque waxa uu sheegay in ciyaarta ugu horreysa ee koobka adduunka ay la ciyaari doonaan Netherlands, isla markaana uu u baahan yahay ciyaartooyo badan oo wanaagsan.
si gaar ah waxa uu u xusay in Juanfran iyo Diego Costa xaaladdooda uu darsi doono iyo inta ay garoomada ka maqnaan doonaan, intaa kadibna uu go’aan qaadan doono.
Xulka Qaranka Spain waxa ay Jimcaha la ciyaari doonaan qaranka Bolivia, waxaanu tababare Del Bosque u xulay ciyaartooyadan:
Goolhaye David de Gea (Manchester United), Pepe Reina (Napoli)
DIfaac; Jordi Alba (Barcelona), Raul Albiol (Napoli), Cesar Azpilicueta (Chelsea), Javi Martinez (Bayern Munich), Alberto Moreno (Sevilla), Gerard Pique (Barcelona)
Dhexda: Sergio Busquets (Barcelona), Santi Cazorla (Arsenal), Gerard Deulofeo (Barcelona), Cesc Fabregas (Barcelona), Xavi Hernandez (Barcelona), Andres Iniesta (Barcelona), Ander Iturraspe (Athletic Bilbao), Juan Mata (Manchester United), Pedro (Barcelona), David Silva (Manchester City)
Weerarka: Fernando Torres (Chelsea)
Xulkan ayaa waxa ka maqan dhamaan ciyaartooyada Real Madrid iyo Atletico Madrid oo loo reebay daalkii kulanka Champions League.
SIdoo kale, Jesus Navas, Alvaro Negredo iyo Fernando LIorente ayuu tababaruhu sheegay inay isdejiyaan oo aanu jirin sabab ay u werweraan.
Pirlo oo ka digay khatarta xulka England
Bilbao Oo Ku Guuleysatay Spanish Super Cup Iyo Wixii Helay Barcelona